Traktọ na-eweta na Factory - China traktọ Manufacturers
Product Ihe traktọ bụ a onwe-propelled ike igwe iji sere na ụgbọala na-arụ ọrụ igwe iji wuchaa dị iche iche mobile arụmọrụ. Enwere ike iji ya maka ike ọrụ arụ ọrụ. Ọ mejupụtara usoro ma ọ bụ ngwaọrụ dị ka injin, nnyefe, ịga ije, iduzi, nkwusioru hydraulic, mmepụta ike, ngwa ọrụ eletriki, njikwa ịnya ụgbọ ala na traction. A na-ebufe ike injin site na usoro nnyefe gaa na wiilị na-akwọ ụgbọala iji mee traktọ ụgbọala. Na ndụ n'ezie, ọ bụ ihe nkịtị ...
Obere obere traktọ kwesịrị ekwesị maka ala, ugwu, na ugwu ugwu, tinyere ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka ịkọ ihe, ịgha mkpụrụ osisi, owuwe ihe ubi, ịkọ ihe, ịzọcha ọka, na ọrụ ndị ọzọ, njem dị mkpụmkpụ na trailers. Obere traktọ bụ eriri-ụgbọala, mana ya na hydraulic iji bulie na ala. Nwere ike ijikọ igwe ọrụ na ngwa ọrụ pụrụ iche, dịka traktọ na-eje ije. Uru: ọnụ ala dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Njirimara 1. it can be dri ...